Tsara Daholo ve ny Fivavahana Rehetra?
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Boligara Cebuano Chichewa Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Groenlandey Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Litoanianina Luo Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Mizo Mooré Myama Norvezianina Ossète Ourdou Papiamento (Curaçao) Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Sesotho (Lesotho) Setswana Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tahisianina Tailandey Tiorka Tseky Tsonga Vietnamianina Xhosa Zoloa Éwé
MARO be ny fivavahana ankehitriny. Hita tamin’ny fanadihadiana vao haingana fa misy fivavahana lehibe 19 sy fivavahana madinika 10 000 eo ho eo eran-tany. Maro noho ny hatramin’izay ny fivavahana azo isafidianana. Zava-dehibe àry ve ny fivavahana fidinao?
Misy milaza hoe toy ny lalana samihafa mankany an-tampon’ny tendrombohitra iray ny fivavahana, ka tsy mampaninona izay handehananao, satria samy tonga any daholo. Mihevitra ireny olona ireny fa iray ihany ny Andriamanitra, ka ahafahana manatona azy daholo ny fivavahana rehetra.
Lalana samihafa ahafahana manatona an’Andriamanitra ve ny fivavahana rehetra?
Inona no nolazain’i Jesosy Kristy momba izany? Anisan’ny mpampianatra nohajaina indrindra mantsy izy, teo amin’ny resaka fivavahana. Hoy izy tamin’ny mpianany: “Midira amin’ny vavahady èty hianareo.” Nahoana? “Fa lehibe ny vavahady, ary malalaka ny làlana izay mankany amin’ny fahaverezana, ka maro ny miditra any. Fa èty ny vavahady, ary tèry ny làlana izay mankany amin’ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy.”—Matio 7:13, 14, Fandikan-teny Protestanta.
Tena nilaza ve i Jesosy fa misy fivavahana “mankany amin’ny fahaverezana”? Sa nilaza izy hoe izay tsy mino an’Andriamanitra ihany no eo amin’ilay lalana malalaka, fa izay mpino kosa eo amin’ilay lalana tery mankany amin’ny fiainana, na inona na inona fivavahany?
Rehefa avy nilaza i Jesosy fa tsy misy afa-tsy lalana roa, dia hoy izy: “Mitandrema hianareo, fandrao ho voafitaky ny mpaminany sandoka, izay mankao aminareo amin’ny fitafian’ny ondry, fa ao anatiny dia amboadia mitoha izy.” (Matio 7:15, Prot.) Hoy izy avy eo: “Tsy izay rehetra manao amiko hoe: Tompo, Tompo, no hiditra amin’ny fanjakan’ny lanitra; fa izay manao ny sitra-pon’ny Raiko izay any an-danitra.” (Matio 7:21, Fandikan-teny Katolika) Mpivavaka ny olona iray fa tsy hoe tsy mpino, matoa lazaina hoe mpaminany, na miantso an’i Jesosy hoe “Tompo.” Mazava àry ny fampitandreman’i Jesosy: Tsy voatery ho tsara ny fivavahana rehetra, ary tsy izay rehetra mampianatra eo anivon’ny fivavahana no azo itokisana.
Azo atao ve ny mahita an’ilay lalana tery?
Toy ny sarintany ny Baiboly, ka afaka manampy ny olona hahita ny lalana mety, izany hoe ny fivavahana tsara
Tsy lalana samihafa ahafahana manatona an’Andriamanitra ny fivavahana rehetra. Ahoana àry no ahitana an’ilay lalana tery mankany amin’ny fiainana, ao anatin’ireo fivavahana an’arivony ireo? Aoka atao hoe very ao amin’ny tanàn-dehibe iray ianao, ka manontany olona. Manizingizina ny olona iray fa tokony hiantsinanana ianao. Ny iray indray mampirisika anao hiankandrefana. Ny iray kosa milaza fa tsy mampaninona izay lalana hitanao hoe mety. Farany, dia misy olona iray mamoaka sarintany marina tsara, ary manoro anao ny lalana tena izy. Omeny anao ilay sarintany avy eo, mba hojerenao eny an-dalana. Tsy matoky kokoa ve ianao amin’izay hoe ho tonga any amin’ilay toerana halehanao?
Mila sarintany an’ohatra koa isika rehefa hifidy ny fivavahana tena mety. Inona izany “sarintany” izany? Ny Baiboly. Izao tokoa no voalazan’izy io: “Izay soratra rehetra nomen’ny tsindrimandrin’Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin’ny fahamarinana.”—2 Timoty 3:16, Prot.
Angamba manana Baiboly amin’ny fiteninao ianao. Azonao ampiasaina ho toy ny sarintany izany mba hitari-dalana anao hahita an’izay fivavahana tsara. Mamoaka Baiboly marina tsara ny Vavolombelon’i Jehovah, izay mpampanonta an’ity gazety ity. Tsy inona izany fa Ny Soratra Masina—Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao. Raha tsy Vavolombelon’i Jehovah anefa ianao, dia mety ho tianao ny hampiasa Baiboly hafa, eo am-pandinihana hoe tsara sa tsia ny fivavahana iray. Baiboly fampiasan’ny fivavahana samihafa àry no ampiasaina ato amin’ity lahatsoratra ity sy ireo lahatsoratra telo manaraka.
Ampitahao amin’izay lazain’ny Baiboly ny zavatra fantatrao, rehefa mamaky an’ireo lahatsoratra manaraka ianao. Tadidio foana koa izay nolazain’i Jesosy mahakasika ny fomba hamantarana hoe tsara sa tsia ny fivavahana iray. Hoy mantsy izy: “Ny hazo tsara rehetra mamoa voa tsara, ary ny hazo ratsy rehetra mamoa voa ratsy. Ny hazo tsara tsy mety mamoa voa ratsy, ary ny hazo ratsy tsy mety mamoa voa tsara.” (Matio 7:17, 18, Kat.) Andeha isika handinika ny telo amin’ireo voa tsara lazain’ny Baiboly hoe ahafantarana ny “hazo tsara.”
Hizara Hizara Tsara Daholo ve ny Fivavahana Rehetra?
w09 1/8 p. 3-4
Avelanao Hiresaka Aminao Isan’andro ve Andriamanitra?
“Inona no Hohaninay?”
Momba ny Hoavin’ny Olombelona
Ny Mpandefitra no Tian’i Jehovah
Ohatrinona no Tokony Homeko ny Fiangonana?
Soratra Fandikana boky NY TILIKAMBO FIAMBENANA Aogositra 2009
Hizara Hizara NY TILIKAMBO FIAMBENANA Aogositra 2009
NY TILIKAMBO FIAMBENANA Aogositra 2009